FIHOMBON’NY VALANARETINA : Hifampitadiavana ny ôksizena ho an’ireo marary
Nilaza ny teo anivon’ny Minisiteran’ny fahasalamana fa tsy marina velively ny vaovao miparitaka, izay milaza fa tsy misy intsony ny fitaovana fameloman’aina na oksizena eny amin’ny toeram-pitsaboana. 1er avril 2021
“Disoiko izany, hoy ny Minisitra, fa kosa ny Fanjakana dia tsy mitsahatra mitady vahaolana”.
Etsy an-daniny, miakatra hatrany ny tahan’ireo mararin’ny Covid – 19 ahitana soritr’aretina misy fahasarotana na « forme grave ». Amin’ny ankapobeny dia ny fanamaivanan’ilay olona ny trangan’aretina miseho aminy no antony mahatonga an’io fahasarotana io, satria raha vao manatona toeram-pitsaboana ny olona iray, raha vao miseho ny ahiahy dia tsy ho tonga amin’izany fahasemporana izany mihitsy. Ao anatin’ny fihomboany tanteraka ilay valanaretina Covid – 19 amin’ izao fotoana izao. Manomboka tsy maharaka ireo fitaovana ampiasaina entina hikarakarana an’ireo marary manoloana izany, tafiditra ao anatin’izay ny ôksizena izay tena manan-danja amin’ireo marary tratran’ny fahasemporana.
Nilaza ny Minisitry ny fahasalamam-bahoaka, ny Pr Rakotovao Hanitrala Jean Louis fa tsy i Madagasikara irery no misedra olana amin’io tsy fahampian’ny fitaovana oksizena io fa firenen-dehibe maro maneran-tany. “Miezaka ary mitady ny vahaolana rehetra ny Fitondram-panjakana”, hoy izy. « Miomana isika ary miomana tsara isika satria na ny firenena lehibe aza dia sahirana amin’ny fisehoan’ilay valanaretina ary be dia be ihany koa no sahirana amin’izany oksizena izany. Ny Fanjakana dia mitady vahaolana foana. Ny hoe, tsy misy dia tsy marina fa mitady ny vahaolana rehetra isika.
Ho antsika izay tratran’ny Covid – 19 dia taitra, lasa miahiahy be any anatiny any izy kanefa izay dia mahasempotra. Ireny rehetra ireny dia mila tandremantsika foana », hoy ny Minisitra. Mahakasika ny vaksiny miady amin’ny Covid – 19 kosa indray dia nilaza ny Minisitra fa izay vaksiny mifanaraka amin’ny tranga misy eto Madagasikara no hatao. An-dalam-pikarakarana izany ny Fitondram-panjakana, ary misy ny rafitra tsy maintsy arahina.
« Ny fampidirana vaksiny dia misy lalàna mifehy na iraisam- pirenena, ary eto amintsika ihany koa dia misy antana-tohatra, tamin’ny zoma isika no efa nanomboka nanao ny antontan-taratasy rehetra miroso tsikelikely mankany amin’izay zavatra izay. Tsy mampaninona raha atomboka amin’ny mpiasan’ny fahasalamana ilay izy, misy rafitra mila arahina fa aleo isika mba ho tony. Fa isika tsy maintsy mitady izay vaksiny mifanaraka amin’ny zava-misy eto amintsika », araka ny fanazavana noentin’ny Minisitra hatrany.